Muxuu Samir Nasri ka yiri xiriirka isaga iyo Pep ka dhaxeeyo (Warbixin Xasaasi ah). | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » Muxuu Samir Nasri ka yiri xiriirka isaga iyo Pep ka dhaxeeyo (Warbixin Xasaasi ah).
Muxuu Samir Nasri ka yiri xiriirka isaga iyo Pep ka dhaxeeyo (Warbixin Xasaasi ah).
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 2-09-16 1:05 PM Ciyaaryahankii hore ee kooxda Arsenal Samir Nasri ayaa sheegay in Pep Guardiola uu rabay inuu sii joogo kooxda Manchester City, laakiin waxa uu sheegay in isaga uu ka dalbaday in hal xilli ciyaareed si amaah ah lagu fasaxo.
Samir ayaa ku biiray xiddigaha kooxda koowaad ee Joe Hart, Wilfried Bony, Eliaquim Mangala iyo Jason Denayer kuwaasoo qaab amnaah ah kaga tagay Etihad Stadium maalintii ugu dambeysay suuqa kala iibsiga ciyaartooyda.
muddada dheer, rajadayda waxa ay aheyd in aan ka hoos ciyaaro Guardiola , Nasri, ayaa u sheegay saxaafada.
Pep ayaa hore ugu sheegay Nasri inuu yahay nin buuran islamarkaana loo baahan yahay inuu dhimo jirkiisa, tasoo keentay ugu dambeyn in xitaa kooxda koowaad laga tuuro